Fiatrehana fifidianana : voarara ny fampielezan-kevitra ataon’ny mpiasam-panjakana | NewsMada
“Tsy azon’ny mpiasam-panjakana, sivily na miaramila, na ny mpiasan’ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, atao ny manao fampielezan-kevitra hampandaniana kandidà iray, na hampiely sary famantarana na kabary amina fampielezan-kevitra.”
Io ny fanazavan’ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano, momba ny fanaovana fampielezan-kevitra amin’izao fifidianana loholona izao, araka ny And. 57 amin’ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana.
Ao anatin’izao fotoan’ny fampielezan-kevitra izao, tsy azo atao koa, ohatra, ny fitokanana ofisialy rehetra sy ny filazana goavana ataon’ny fitondram-panjakana sy ireo vondrombahoaka itsinjaram-pahefana mety hanome tombondahiny antoko politika na kandidà.
Tsy azo atao koa ny mampiasa fitaovam-panjakana toy ny fiara sy ny tranom-panjakana ary ny fahefam-panjakana anaovana fampielezan-kevitra hampandaniana kandidà iray.
Manao fanaraha-maso ny Ceni
“Rehefa misy ny fanairana aty amin’ny Ceni, mampamerina amin’ny laoniny izay heverina ho fihoaram-pefy ny ataon’ny Ceni voalohany indrindra”, hoy izy momba ny fanaraha-maso izay fanaovana fampielezan-kevitra izay.
Ny amin’ny fametrahana ny peta-drindrina no hany fahefan’ny Ceni amin’izao. Raha amin’ny toerana tsy tokony hametahana azy izany, mampitandrina hampamerina amin’ny laoniny ny Ceni. Azony atao ny mampandoa vola ny kandidà mandika lalàna. Mba hahazoan’ny Ceni mampiasa izay vola izay amin’ny fanalana izay peta-drindrina izay.